Faafaahin..600 Oo Musharax Ayaa U Taagan Xilka Madaxweynaha! | Xaqiiqonews
Faafaahin..600 Oo Musharax Ayaa U Taagan Xilka Madaxweynaha!
Madaxa guddiga doorashooyinka ee Iiraan Jamal Cariif ayaa sheegay in 592 qof ay isku sharxeen doorashooyinka madaxtinimo ee la filaayo in ay noqoto doorashadii 13,aad ee dalkaasi ka dhacdo.
Jamal Cariif oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri: shantii maalmood ee ugu dambeysay waxa aan diwaan gelinay 592 musharax oo ay ka mid yihiin 40 haween ah.
272 ka mid ah musharixiinta ayaa heerka aqoontoodu tahay Digriiga koowaad ee jaamacadda Baajalor iyo wixii ka hooseeya, halka 320 ka mid ahna ay heystaan shahaadada master digrii iyo wixii ka sareeya.
Doorashooyinka madaxtinimo ee Iiraan oo afartii sanaba mar la qabto ayaa lagu wadoo in ay ka dhacdo dalkaasi 18-ka bisha soo socoto ee June.
Doorashooyinkaasi waxaa barbar socda doorashooyinka golaha “shuurada” iyo doorashooyinka golaha islaamiga, waxaana doorashooyinka ay ka dhacayaan 1372-da magaalo iyo 40 kun iyo 620-ka tuulo ee dalkaasi ka kooban yahay.